यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? यदि छ भने तपाइ भाग्यमानी ! – live 60media
पाेखरा २८ कात्तिक- भन्छन नि सुख र दुःख आउँछ जान्छ, कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ ।
← नेपालीको उद्धार हुने २५ गन्तव्यको हवाई भाडा निर्धारण, खाडीका लागि कम्तिमा ६० हजार
नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय →